Fitsarana maimaim-poana NordVPN 2020 - Antoka miverina amin'ny vola 30 andro - Tolotra
Ahoana ny fomba ahazoana andrana maimaim-poana any NordVPN 30 andro?
Manantena ny hahazo tanana amin'ny NordVPN maimaim-poana ve ianao? Azonao atao mandritra ny iray volana. Hampianatra anao fomba ara-dalàna izahay hahazoana NordVPN mandritra ny iray volana. araho ny torolàlana tsikelikely, ary ho avy tsy ho ela ianao.
Tena manolotra fitsapana maimaimpoana ve i NordVPN?
Ara-teknika ENY. Na dia mila mandoa vola alohan'ny hidiranao amin'ny serivisy premium aza izy ireo dia mangataka antoka famerenam-bola mandritra ny 30 andro. Noho izany, rehefa mividy ianao ary manafoana ny fividianana ao anatin'ny 30 andro aorin'ny fanombohana azy dia ho tafaverina ny volanao feno.
Izay no hampianarinay anao amin'ity torolàlana ity. Ka tsy misy hatak'andro, andao hiditra ao.
Te hanana tolotra VPN misimisy kokoa? Taratasim-bola ExpressVPN Fitsapana maimaim-poana miaraka amin'ny tolotra vola 30 andro
Dingana fitakiana fitakiana maimaimpoana NordVPN:
Nataonay mora kokoa ity dingana ity ho anao. Kitiho fotsiny Eto , ary hoentina mivantana any amin'ny tranokala ofisialin'ny NordVPN ianao.
Raha vantany vao eo amin'ny tranonkalany ianao. Hahazo ‘Get NornVPN'Safidy eo amin'ny zorony ambony havanana amin'ny efijery. Kitiho eo ary atombohy ny fizotranao.
Ankehitriny, tonga ny fotoana hisafidianana izay drafitra tianao hovidiana. Satria ny hany tanjon'ity torolàlana ity dia ny hahazoana fitsapana maimaimpoana, mamporisika anao izahay hahazo ny drafitra 1 volana satria tsy maintsy mampiasa vola kely indrindra mandritra ny 30 andro amin'izany drafitra manokana izany ianao.
Raha vantany vao nifidy ny drafitra ianao dia midina midina. Hahita bokotra miloko manga ianao manao hoe 'Tohizo ny fandoavam-bola ', kitiho ny bokotra izay ary hoentina amin'ny efijery manaraka ianao. Eto dia tsy maintsy ampidirinao ny antsipirian'ny momba anao sy ny fandoavanao vola. Fenoy tsara ny antsipiriany ary tsindrio ny 'Tohizo'.
Handray mailaka avy any NordVPN ianao momba ny antsipirian'ny kaontinao izay noforoninao. Tsy maintsy hampandeha ny kaontinao ianao avy eo. Hisy bokotra miloko manga milaza hoe 'Set Password and Activate Account'. Tsindrio eo.
Hahazo boaty fifanakalozan-kevitra momba ny fametrahana teny miafina vaovao amin'ny kaontinao NordVPN ianao. Apetraho ny tenimiafinao tadiavina ary tsindrio ny 'Change Password.'
Rehefa avy nametraka ny teny miafinao tsara ianao. Hoentina any amin'ny fizarana misintona ianao. Mila misintona ny VPN avy eo ianao, ary vita.
Arahabaina! Vonona hampiasa ny endri-javatra premium NordVPN ianao rehetra.
Ahoana no hanafoanana ny fitsapana maimaimpoana amin'ny NordVPN?
Te-hamerina ny volanao ianao, marina? Ahoana no ahazoanao azy? Matokia fa holazainay aminao ny fomba marina hampiharanao ny famerenam-bola alohan'ny 30 andro mba ho fitsarana maimaimpoana ho anao io.
Mandehana any amin'ny tranokala ofisialy NordVPN. tsindrio Eto tonga eo no ho eo.
Raha efa tafiditra ianao, tsara ary tsara fa raha tsy izany dia miditra amin'ny kaontinao. Ho hitanao eo amin'ny zoro ankavanana ambony amin'ny efijery ny safidy fidirana. Rehefa tsindrio eo io dia hisokatra ny takelaka hafa miaraka amin'ny efijery fidirana. Ampidiro ny mari-pahaizana NordVPN anao ary midira ao amin'ny kaontinao.
Rehefa tafiditra ao amin'ny kaontinao NordVPN ianao dia mila mahita ilay boaty chat izay hampifandray anao amin'ny fanohanan'ny mpanjifa. Ity chatbox ity dia ho eo amin'ny zoro ambany ankavanan'ny efijery. Izy io dia ho boribory miloko volondavenona misy marika famantarana ao anatiny.
Aorian'ny tsindrio ny chatbox dia hanomboka ny resaka ny chatbot NordVPN. Soraty fotsiny eo fa te hiresaka amin'ny fanohanan'ny mpanjifa ianao. Hanontany anao ny chatbot momba ny zavatra tianao horesahina amin'ny fanohanan'ny mpanjifa. Lazao azy fa momba ny faktiora. Aorian'izany dia hanontany anao ny id amin'ny mailakao ianao. Ampidiro ny mailaka anao ary tsindrio ny fandefasana. Farany, hifandray amin'ny maso ivoho NordVPN ianao.
Lazao azy ireo fotsiny fa te hanafoana ny fisoratana anarana ianao ary mitady famerenam-bola aorian'ny fanontaniana sy valiny ofisialy vitsivitsy. Ny fanohanan'ny mpanjifa dia hanafoana ny famandrihana anao ary hamoaka ny fandoavam-bola amin'ny fomba fandoavanao tany am-boalohany.
Izany no momba izany. Tokony hahazo ny famerenam-bola feno ianao ao anatin'ny 5-7 andro fiasana.
Inona no antenaina amin'ny kinova NordVPN Free Trial?
Rehefa nandoa ny serivisy premium ianao dia namaha ny fiasa rehetra omen'ny NordVPN.Ity misy topy maso ireo fiasa lehibe sasany azon'i NordVPN atolotra mandritra ny fotoam-pitsarana maimaimpoana.
Hanana fahalalahana misafidy amin'ireo mpizara 5400 mahery ianao izay hita any amin'ny firenena 59.
Ankafizo mpizara P2P an-jatony izay mamela anao hizara rakitra lehibe miaraka amin'ny filaminana tanteraka.
Ny fifandraisana misy anao dia azo antoka ao ambadiky ny tsara indrindra amin'ny kilasy encryptions natolotry NordVPN
Tsy misy hazo voatazona amin'ny asanao. Koa satria tsy misy hazo, tsy misy mahalala izay nataonao tamin'ny internet. Tapitra ny fiainanao manokana.
Mampifandray fitaovana 6 hatramin'ny tambajotra proxy. Tsy mila fitaovana mitovy amin'izany ireo fitaovana ireo. Azonao atao ny mampifandray fitaovana 6 rehetra.
Sakano ny malware sy ny dokam-barotra manimba.
Fitsapana maimaim-poana VPN vs Garantier miverina amin'ny vola:
Ny fitsapana maimaimpoana sy ny antoka famerenam-bola dia tsy mitovy. Andao hohazavaina.Amin'ny kinova fanandramana maimaimpoana dia mahazo fidirana amin'ireo endri-javatra premium ianao, saingy ity no azo. Tsy ny serivisy premium rehetra dia tafiditra ao anaty fitsarana maimaimpoana; ny sasany amin'izy ireo dia natokana ho an'ny mpanjifa premium izay mandoa vola tokoa amin'ny fampiasana ny serivisy.
Na dia tsy misy aza ny endri-javatra rehetra, ny misy dia voafetra ihany koa amin'ny fampiasana. Oh na dia mahazo fidirana amin'ny mpizara izay tsy misy afa-tsy ho an'ny mpampiasa premium ianao dia tsy afaka mihoatra ny fetra hafainganam-pandeha voafaritra voafaritra, na amin'ny tranga sasany dia tsy afaka mampiasa izany mpizara izany ianao afaka 10 minitra.
Ny fanandramana maimaim-poana koa dia atolotra mandritra ny fotoana fohy kokoa.Andao isika hiresaka momba ny teti-bola miantoka ny famerenam-bola. Ny zavatra ataontsika amin'ny tetika famerenam-bola dia mandoa vola mialoha izahay mampiasa ny serivisy, ka rehefa mandoa ny fampiasana ny serivisy dia mahazo ny endri-javatra premium rehetra tsy misy fetra. Na dia hanafoana ny famandrihana alohanay 30 andro aza izahay mba hahafahanay mahazo famerenam-bola, tsy maninona izany.
NordVPN dia manolotra politika famerenam-bola 30 andro. Milamina izany. Izy ireo dia iray amin'ireo mpamatsy tambajotra proxy malaza manerantany. Tsy misy fepetra sy fepetra miafina, ary azo antoka ny volanao. Hamarino fotsiny fa mangataka famerenam-bola ianao alohan'ny marika 30 andro.
Drafitra momba ny vidin'ny NordVPN:
NordVPN dia manolotra drafitra telo. Drafitra iray volana, drafitra isan-taona ary drafitra roa taona.
drafitra iray volana:Mandany $ 11.95 (₹ 883)
Drafitra isan-taona:Manefa $ 4.92 ($ 364) isam-bolana.
Drafitra taom-panambadiana:Mandany $ 3,71 (₹ @ 274) isam-bolana.
Ny drafitra rehetra atolotry ny NordVPN dia misy antoka famerenam-bola 30 andro.
Ary aorian'ny fahataperan'ilay fitsapana maimaimpoana NordVPN?
Rehefa avy reraka ny fotoam-pitsapana maimaim-poana dia tsy azonao atao ny mamerina azy io. Mila mividy ny iray amin'ireo drafitra telo ataony ianao ary avy eo ianao irery no afaka mampiasa NordVPN.Manoro hevitra anao mafy izahay mba hividy fividianana ara-dalàna fa tsy handeha ho an'ny fampiharana modded. Ireo dia mety misy viriosy manimba sy malware mamono tena mety hampidi-doza anao.
1Q. Firy ny fitaovana azo ampiasaina amin'ny NordVPN indray mandeha?
taona:Azonao atao ny mampifandray fitaovana enina amin'ny fotoana iray amin'ny tambajotra proxy. Ary raha te hampifandray fitaovana mihoatra ny iray amin'ny mpizara iray ianao dia mila misafidy protokol VPN hafa fotsiny ho an'ny fitaovana hafa.
2. Iza amin'ireo fomba fandoavam-bola no eken'ny NordVPN?
taona:NordVPN dia manaiky ny kara-trosa isan-karazany, Paypal, AmazonPay. Ny fandoavam-bola dia azo atao amin'ny alàlan'ny GooglePay sy iTunes ihany koa. Manaiky karatra mialoha mialoha vitsivitsy ihany koa izy ireo. Azonao atao koa ny mividy amin'ny fivarotana antsinjarany mifandraika. Eto no lisitr'ireo fivarotana ireo.
3Q. Azoko atao ve ny manavao ny drafiko aorian'ny iray volana?
taona:Eny, mila miditra ao amin'ny kaontinao fotsiny ianao ary tsindrio ny 'Serivisiko' ary avy eo tsindrio ny 'Change Plan' ary afaka mifidy sy manavao izay drafitra tianao ianao.
4Q. Inona no hatao raha tsy mahazo mailaka fampahavitrihana aho?
taona:Miandrasa 5-10 minitra vao ho tonga ny mailaka. Zahao ireo lahatahiry rehetra ao amin'ny mailakao. Mety ho mety ho ilay mailaka fampandehanana dia voamarika ho toy ny spam na mailaka fampiroboroboana. Jereo ihany koa ny fampirimana junk.
Nanatsoaka hevitra izahay fa ny hack maimaimpoana dia tena miasa ary fomba ara-dalàna ahazoana miditra amin'ireo endri-tsoratra premium rehetra atolotry NordVPN. Dingana mahitsy izy io, ary miaraka amin'ny torolàlana tsikelikely, na dia ny mpankafy aza dia afaka mitaky ny fitsarana maimaimpoana.
NordVPN dia iray amin'ireo mpamatsy tambajotra proxy, ary mendrika ny hahazoana ny serivisy raha te-hilamina ianao ary ho voaro amin'ity tontolo an-tserasera ity.
Evanjely Mamatonalina Saison 2: Daty Famoahana: Toetra Fanavaozana & Fanafoanana amin'ny 2022!
Ny maha-Andriamanitra: Nahemotra mandritra ny fotoana tsy voafetra ireo mahery fo lavo
avadiho ny vid youtube ho mp3
amin'ny fotoana rehetra.com/activate/roku
ny fomba filalaovana lalao android amin'ny pc tsy misy emulator
tranokala sarimihetsika an-tserasera maimaim-poana tsy misy alaina
fomba ahazoana mivantana Xbox xbox mivantana
mijery sarimihetsika an-trano maimaim-poana amin'ny Internet
fihenam-bidy ho an'ny mpianatra ny rafitra miasa windows